वेपत्ता पति खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह « Loktantrapost
वेपत्ता पति खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १९:४९
झापा, २८ चैत । बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कतार गएका एक युवा बेपत्ता भएका छन् ।
कचनकवल– ६ घर भएका ४८ बर्षका सागर उप्रेती २०७२ मङ्सिर ९ गते कतार गएका थिए ।
बिर्तामोड स्थित एक्टीभ एजेन्ट मेनपावरबाट बिदेशिएका उनी गएको एक बर्षपछि आजको दिनसम्म सम्पर्क बिहिन रहेको परिवारले जनाएको छ । शनिबार बिर्तामोड स्थित रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिवारले यस्तो बताएका हुन् ।
उप्रेती परिवारका अनुसार प्रशासनलाई पटक–पटक निवेदन दिदा पनि यस कुरालाई वेवास्था गरेको र मेनपावरले पनि यस कुरालाई चासो नदेखाएको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा सागरकि श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान जिउदो या मरेको भएपनि खोजीकार्य गरीदिनुहुन सबै पत्रकाहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । उन्ले भनिन् ‘म आजको दिनसम्म उहाँलाई खोजी रहेकी छु, विवाह भएको ९ महिना पछिदेखि म उहाँसँग सम्पर्कमा छैन, म एक छोरी मान्छे भएर म कसलाई गुहार्नु । मेरो बाच्ने आधार छोरा छोरीको ठाँउबाट पनि छैन त्यसैले सम्पूर्ण पत्रकारलाई खोजीकार्य गरीदिनुहुन बिन्ती गर्छु ।
त्यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बुवा प्रेमप्रसाद उप्रेतीले आजको दिनसम्मको खोजीकार्यमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलबाट वि. सं. २०७६ साल कार्तिक १० गते ८ः५७ बजे उनका छोरा नेपाल प्रवेश गरेको रेकर्ड प्राप्त भएको तर छोराको पत्ता नलागेको दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी सागरका मामा तुलसी मैनालीले भान्जाको खोजीकार्यमा मेनपावरले झुटो आश्वासन देखाएको र कतैबाट पत्ता नलागेपछि आफुहरु मिडियाको सहयोगमा आएको बताएका छन् ।